Iji kwado obodo ime obodo na ikere òkè na onyinye onyinye nke Red Cross Society nke Hunan Province | Micomme
Ndio Kwado obodo ime obodo na ikere òkè na onyinye onyinye nke Red Cross Society nke Hunan Province
Micomme tinyere ụkwụ na Hunan ma gaa ụwa. N'oge mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ nwetara nlekọta nke ndị isi na ndị ọkachamara na ọkwa niile. Iji nyekwuru ụlọ ọrụ ahụike nke Hunan Province aka ịlụ ọgụ megide COVID-19, Micomme kpebiri isonyere ụlọ ọgwụ ndị Hunan Provincial na-emekọrịta ihe site na nkwado nke Hunan Red Cross Society. E nyere ngụkọta ọgwụ ike mmadụ 80 na-adịghị emerụ ahụ na akwa mmiri ọgwụ ikuku n'ọkpụkpụ azụ, yana uru ahịa nke 6,2 nde yuan. Ngwa ngwa ogwu a gha agha imegide COVID-19, na-enyere Hunan Province aka inwe mmeri ikpeazu megide COVID-19. Uzo eji aru oru nke abuo gara Wuhan na March 10, 2020 na 3: 3 nke ututu. Thegbọ njem Micomme na-ebugharị ngwa ngwa na Wuhan na ngwaọrụ iku ume iku ume 101. Ngwaọrụ 101 ndị a gụnyere ngwaọrụ 90 na-eme ka ọnụnọ mmadụ na - agwọ ọrịa oxygen na 11 na - anaghị efe efe. Cargbọala rutere na hanlọ Ọgwụ Wuhan huoshenshan na elekere asatọ nke ụtụtụ.
Ndị na-emepụta ventilashị nke China na-agbatịkwu mmepụta iji gbasaa inweta ihe na mba ndị ọzọ dị ka ihe ndị chọrọ site na mba ofesi na-arịa n'oge ọrịa COVID-19.
Ventilator, ngwaọrụ na-enyere iku ume aka, bụ ihe kachasị mkpa n'akụkụ ihe mkpuchi ahụike, ụdị mkpuchi na gwọdụ na-agagharị na mbọ nchịkwa ụwa.
Ihe dị ka ikuku 880,000 chọrọ ihe zuru ụwa ọnụ n'agbanyeghị ọrịa a, ebe United States nwere mkpa nke ndị na-ekesa ikuku 75,000, ebe France, Germany, Italytali, Spain na Britain dị mkpụmkpụ 74,000, ka GlobalData, ụlọ ọrụ data na nyocha na-ekwu. Ndị na-emepụta ventilashị nke China ugbu a na-arụ ọrụ gburugburu elekere iji nyere mba ndị ọzọ mkpa enyemaka nke ndị na-eku ume ọkụ ka a na-ahụ maka inweta ụlọ.
Micomme, onye na-emepụta ọgwụ na iku ume na Changsha, kwuru na ya enwetala iwu site na mba na mpaghara 52 ma nyefee ihe karịrị ndị ọrụ ikuku vootu 1000. A haziri usoro ọrụ maka iwu azụmahịa bịanyere aka na ngwụsị oge ọkọchị. Nke a bụ otu ihe maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Micomme kwuru na o zigala ikuku ikuku 30 na throughtali site na ụgbọelu ndị nwere ụgbọ mmiri si na Changsha na Machị 21. Ruo ugbu a, ezipụla ikuku ikuku ikuku abụọ maka enyemaka mberede na .tali. O bughariala narị ndị 250 na-enye ikuku gaa Serbia.
Oge nzipu ozi: Jul-20-2020